Yakafanirwa Nylon Straps yeiyo 38mm Apple Watch | Ndinobva mac
Yakagadzirwa tambo dzenylon yeiyo 38mm Apple Watch
Kana iwe uine Apple Watch ye38 mm chinyorwa ichi chinoratidzwa iwe. Isu tawana sarudzo nyowani maererano nematanho aNelson kune mudiki mumhuri yeApple. Sezvo iwe ungatoziva kare, echazvino tambo mamodheru anounzwa neApple yeApple Watch ivo vanoenda kuburikidza neyenylon zvinhu.
Haisi nguva yekutanga kuti Apple iise mhando iyi yemabhanhire ari kutengeswa uye imhaka yekugamuchirwa kukuru kwekuti mamodheru ekutanga emabhandi enylon aive, vakasarudza kuburitsa mavara matsva ezhizha rapfuura.
Nekudaro, tambo dzakaratidzwa neApple dziri nyore uye dzine mavara akaderedzwa, saka isu tatsvaga mambure kuti tiwane mamwe mamodheru uye isu tazviwana. Isu tinokupa iwe sarudzo nyowani dzaNelson tambo asi nemaprinta ayo ivo vanozopa kutaridzika kusiri pachena kune yako Apple Watch.
Hokore newachi iri kuburikidza nezvikorekedzo zvechiratidzo izvo zvatinogona kusarudza chena kana nhema dema simbi uye nekudaro tinokwanisa nakidzwa neaya mamodheru matsva pa wachi ine mwenje kana muviri wakasviba. Pakati pemaitiro aripo isu tine mitsara yakaita seyekit machira, polka madhi kana ganda remhuka.
Iwe une matanhatu akasiyana mamodheru, maviri mune akasviba mavara, imwe mune tsvuku motifs, imwe mune yeblue motifs uye maviri mune brown, nhema uye girini mapatani. Pasina mubvunzo iyo yakanaka kwazvo sarudzo iyo zvakare ine mutengo wakanaka kwazvo uye iwe unogona tenga nhasi ku13,63 euros pauniti. Unogona kudzidza zvakawanda pane iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Yakagadzirwa tambo dzenylon yeiyo 38mm Apple Watch